Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa qorsheynaya inuu racfaan ka qaato ganaaxii seddexda kulan iyo 40ka kun euro ee ay ku soo rogtay UEFA ka dib markii ay ku heleen inuu si xun u dhaqmay ka dib ciyaartii Champions League ee AC Milan.
Wenger ayaa ciyaarta ka dib la hadlay saxaafada, kumana uusan faraxsaneyn qaabkii uu u dhaqmay garsoore Damir Skomina isagoo ku eedeeyay garsooraha reer Slovenia inuu bulisiyoonada si fudud ugu dhigayay kooxda Milan.
“Kuma faraxsaneyn garsooraha sababtoo ah waxaan dareemayay inuu bixinayay laadad xor ah oo tiro badan” ayuu yiri Wenger ciyaarta ka dib.
“Mar kasta oo ciyaaryahan Milan ah uu dhulka isku tuuro waxa uu siinayay laad xor ah, waana ay ogaadeen inay helayaan bulisiyoono waana ay ka faa’ideysteen”
Wenger ayaa haatan dareensan in ganaaxa lagu soo rogay hadalkaasi darteed inuusan aheyn mid cadaalad ah, waxaana uu dareesan yahay in garsoorayaasha tartanka inay yihiin kuwa aan la taaban karin.
“Cadaalad ma ahan, racfaan ayaana ka qaadan doonaa” ayuu Wenger u sheegay suxufiyiinta.
“Waxaan aaminsanahay inay bedeleen taramada UEFA. Garsoorayaasha Champions League ma ahan kuwa laga hadli karo ama la taaban karo, xitaa hal erey uma sheegi kartid. Waxa kaliya ee ay fahmaan ciyaarta ka dib waa inay cabasho kaa gudbiyaan”
Wenger ayaa sidoo kale ka hadlay sida UEFA ay u daba dhigatay xilliyadii u danbeeyay, waxaana ay ganaaxayaan markii labaad hal xilli ciyaareed.
Waxaana uu yiri: “Waa adag tahay in la fahmo. Sannadkii hore waxaa la ii ganaaxay markii labaad”
“Ganaaxii hore waxa uu ahaa mid aan cadaalad aheyn, kii labaad kaftan ayuu ahaa sababtoo ah waxa ay ii sheegeen inaan sameeyo ayay hadana yiraahdeen ‘Maya, waan qaldaneyn inaad saas sameyso ma aheyn’, sidaasi darteed dhib ayaan ku qabaa UEFA”